ဦး နှောက်လေ့ကျင့်ခန်း - နှင့် Doug အကြောင်းအနည်းငယ် Martech Zone
ဦး နှောက်လေ့ကျင့်ခန်း - နှင့် Doug အကြောင်းအနည်းငယ်
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2006 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
၀ က်ဘ်ကိုကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အနုပညာနှင့်ပရိုဂရမ်များအကြားရှိမျဉ်းကိုဖြတ်ကျော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်ကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ အမြဲတမ်းတစ်နေရာရာကိုဆွဲချခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြီးတန်းနှစ်တွင် Industrial Drafting ၌ကောလိပ်သင်တန်းအချို့တက်ခဲ့သည်။ မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခဲတံထဲမှအနည်းငယ်ကိုထုတ်ယူလိုက်သော်လည်းတိကျမှန်ကန်စွာရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ငါအတန်းတက်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်တော့မှကောလိပ်အတွက်တက်မယူ။
အဲဒီအစားငါရေတပ်သို့ဝင်ရောက်နှင့်လျှပ်စစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကကျွန်ုပ်အားစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဝဘ်လျှောက်လွှာဒီဇိုင်းသို့ ဦး ဆောင်ခြင်းကြောင့်လူအများစု၏အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သဘာ ၀ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်မှုလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်စက်ပစ္စည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောယုတ္တိဗေဒနှင့်စည်းကမ်းများသည်ကောင်းမွန်သောယုတ္တိဗေဒနှင့်ပြtroublနာဖြေရှင်းခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်ကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကောလိပ်တက်ဖို့ခေါ်သွားတယ်။ ထိုအချိန်ကငါ PLC ၏ (Programmable Logic Controllers) တွင်လှေကားထစ်ယုတ္တိပရိုဂရမ်းမင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြtroublနာရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် PC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Programming၊ Network Integration နှင့် Database Integration ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါနည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ သတင်းစာလုပ်ငန်း။ ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုဘက်ကနေစီးပွားရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုအပြာရောင်ယူနီဖောင်းနဲ့တွေ့လိုက်ရင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလုပ်ဖို့ခက်တယ်။ ဒါကြောင့် ... ငါမြင်းများနှင့်လှည်းများတက်တင်။ သတင်းစာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာသိုလှောင်ရုံဒီဇိုင်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်တဲ့ဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်, ငါ့ကလေးတွေကိုအနောက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းအကြီးမားဆုံးသတင်းစာအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်ကြီးစွာသော applications များတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူဆယ်စုနှစ်ကျော်မှီဝဲခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အတော်လေးကောင်းစွာလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသက် ၄၀ အောက်အောက်ရှိထိပ်ဆုံး ၂၀ တွင်ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းများအတွက်ရေးသားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းသတင်းစာအတွက်ထူးခြားသောဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာစီမံခန့်ခွဲမှုအပြောင်းအလဲတစ်ခုကဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းစေခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများကသတင်းစာများကိုမျိုသိပ်စေခဲ့သဖြင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်သည်ဒေသခံစာတမ်းတွင်အသုံးပြုရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့သတင်းစာနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကခက်ခဲတဲ့အပြောင်းအရွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာကငါထွက်လမ်းအပေါ်အနည်းငယ်တွန်းအားပေးတယ်။ 🙂
နောက်လာမည့်နှစ်တွင်အခြားကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ကူညီရန်သုံးစွဲခဲ့သည် အတိအကျ။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်သောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ရှိတယ်။ ငါကပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အခုငါစိန်ခေါ်တယ်။
တစ်ခါတလေတော့မလုံလောက်ဘူး သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်ဆိုဒ်များစွာကိုလက်ခံကျင်းပခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ဒေသတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုစတင်ခြင်းအတွက် Indianapolis Colts၊ ငါဖွင့်ကူညီပေးခဲ့သည် ငါ Indy ကိုရွေးချယ်ပါ။ဘာကြောင့် Indianapolis ကိုရွေးချယ်ရတာလဲဆိုတာကိုလူတွေပြောနိုင်တဲ့အောက်ခြေကွန်ရက်။ ၎င်းသည်အရှိန်အဟုန်မြင့်မားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်းငါ့ဘလော့ဂ်, နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံများကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး၊ Compendium ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ငါမြန်ဆန်စွာနဲ့ဒေါသအရှိန်အဟုန်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ လုပ်နိုင်တဲ့သဘောထားရှိသူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ 'ဘယ်ဘက် ဦး နှောက်' လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် Photoshop နှင့် Illustrator သုံး၍ ပုံဥပမာများတည်ဆောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဒါဟာဖန်တီးမှုအတော်လေးနည်းနည်းကြာတယ်။ ဒီညမှာဒေသခံ Hollywood တီးဝိုင်းဖြစ်တဲ့ Rok Hollywood အတွက်တံဆိပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်နာရီလောက်အကြာမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်။ ငါတုန့်ပြန်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးအဲဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လုပ်မယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါပျော်နေတယ်၊
အဓိကအချက်ကအသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာရင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ခက်ခဲသောပြproblemsနာများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်၎င်းကိုလူတို့အားပညာပေးခြင်း၌အလွန်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ငါနည်းပညာအတွက် veracious အစာစားချင်စိတ်ရှိသည်။ ဆင်ခြေပေးတဲ့လူတွေကိုငါစိတ်မရှည်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အကူအညီတောင်းခံတဲ့လူတွေကိုငါကူညီပေးရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အပြုံးထက်သာလွန်အောင်ကျွန်ုပ်အားကျေနပ်စရာဘာမှမရှိပါ။
ငါကကုန်သွယ်ရေးအားလုံးရဲ့ဘုရင်တစ်ယောက်ပါ။ (ငါဂျက်ကနေဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတယ်) ဒါပေမယ့်ငါကဘယ်သူမှကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးဘူး။ ငါနိုင်ငံရေးမခံနိုင်ဘူး၊ အထူးသဖြင့်ရုံးခန်း။ ရေတွက်နိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တာမကြိုက်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းတိုင်မရှိသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုမုန်းသည် (ကျွန်ုပ်နောက်ကျ။ ပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ပို့နိုင်ရန် PDA ကိုယူဆောင်လာသည်) ။ ငါနှောင်းပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရတာကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအချိန်သည်များသောအားဖြင့် 10PM နှင့်ညသန်းခေါင်ကြားဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါမနက် ၂၀ ခေါက်အိပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်။
ဒါတွေအားလုံးကိုငါတစ်ယောက်တည်းဖေဖေပဲ! ငါ့ကလေးတွေနှင့်အတူအချိန်စိတ်ကူးသည်။ ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတုန်းပဲ။ ငါ့ကလေးတွေနှစ် ဦး စလုံးမယုံနိုင်စရာဖြစ်ကြသည်။ အိုး၊ ဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး 'ကော်ဖီနေ့' ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါကကျွန်မရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုကံကောင်းချင်တယ်!
သင်သည် MySpace မှလိမ်လည်ခြင်းကိုခံရသည်
13:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 21 မှာ
ကျွန်တော့်အငယ်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ကလေးဘဝအတွက်အဖေတစ်ယောက်တည်းပဲ။ ၎င်းသည်ကွာရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးရွားဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ယောက်ျားများကိုကာလရှည်ကြာမတွေ့ခဲ့ပါ။ အခုသူတို့အားလုံးကြီးပြင်းလာပြီးသူတို့ကိုငါတောင်မမြင်ရဘူး။ အချိန်ကိုမြတ်နိုးပါ။
13:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 27 မှာ
ငါတကယ်သူတို့နှင့်အတူအချိန်အများကြီးရှိသည်, Sterling ။ ငါကလေးတွေချုပ်နှောင်ထားရှိသည်။ ငါအနောက်မြောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းကိုငါရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသူတို့သည်နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီး Louisville တွင်နေထိုင်သောသူတို့၏အမေကိုပိုမိုမြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့မရှိရင်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတာမသေချာဘူး။